I-smartphone yokuqala kaXiaomi kunye noMeitu ivela kwipowusta esemthethweni | I-Androidsis
I-smartphone yokuqala kaXiaomi kunye noMeitu ivela kwipowusta esemthethweni
Ubambiswano olwenziwe nguXiaomi kunye noMeitu luya kuzisa i-smartphone yayo yokuqala kungekudala. Sinokukuqinisekisa oku ngenxa yeengxelo ezenziwa zeefemu zombini ngokubhekisele kwesi siphelo silindelweyo.
Iya kuba yinxalenye ye- Uluhlu lweXiaomi CC malunga nokuqala. Oku kuyangqinelana, mhlawumbi kwimeko yokuqala, kwi I-CC9 yam kunye neCCN yam, ii-smartphones ezimbini esele sikuxelele kwisihlandlo esidlulileyo. Ngoku ukuqinisekisa ngakumbi malunga imodeli yokuqala yomanyano, kuphume iposta ejongene nale ikwangayo. Jonga apha ngezantsi!
Ipowusta ibonisa ifowuni enekhamera yokusonga efanayo naleyo ikwi Asus Zenfone 6. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nale mobile, inemodyuli enkulu kuba ineekhamera ezintathu zangemva. Ukujonga kwakhona, uyilo lubonakala luyinto yomnqamlezo phakathi kwe- I-Huawei Mate 20 Pro kunye neZenfone 6.
Iposta esemthethweni ye-smartphone yokuqala evela kwiXiaomi naseMeitu
Akukho zinkcukacha ngokubhekisele kwiimpawu zekhamera, kodwa siyabheja oko enye yeekhamera inzwa ye-MP ye-48; lo ngumkhwa onamandla kakhulu onokuthi uzaliseke. Kukwanokwenzeka ukuba i-smartphone ixhobise imisebenzi yekhamera emangalisa ngokwenene yokuthatha iiselfies ezinomtsalane, konke kusekwe ekusebenziseni ubukrelekrele beArtificial Intelligence. Ngamafutshane, oku kunokuba yinkosi entsha yekhamera ye-selfie, ukuba i-DxOMark iyayijonga kwaye iyayivuma ngolu hlobo.
Ngokumalunga noyilo, ngokusekwe kwinto enokuthi ichazwe kwi-teaser, ine-gradient epinki yokugqiba amacala egobile kunye namaqhosha apinki kwisakhelo sasekunene. Ukusuka kwezi nkcukacha sinokubona ukuba ngubani i-smartphone entsha egxile kuyo, ngaphezulu kwayo nayiphi na into, nje ukuba yenziwe ngokusemthethweni kunye nayo yonke ingcaciso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-smartphone yokuqala kaXiaomi kunye noMeitu ivela kwipowusta esemthethweni
Isamsung iyanciphisa, kwakhona, uhlaziyo oluqhelekileyo lweGPS S7
UGoogle Gcina ungaphezulu kwe-500 yezigidi ezikhutshelweyo